Dhammaan wixii ku saabsan ArcGIS - Geofumadas
All oo ku saabsan ArcGIS
Boggan waa soo koobid kooban oo ku saabsan mawduucyada ku jira boggan ku saabsan Arc GIS - ESRI. Kuma jiraan wararkii ugu dambeeyay.
Isdhexgalka ArcGIS ee barnaamijyada kale
KloiGoogle, si aad ula xariirto Google barnaamijkaaga GIS
Isbarbardhigga ArcGIS ee barnaamijyada kale
Nolosha ka dib ArcView 3.3 ... GvSIG
ArcView 3x isticmaala GvSIG
Ku saabsan ESRI iyo ArcGIS
/ »> Muxuu ku raadinayaa ESRI liisamada cusub?
ArcView, ArcGIS iyo buugga tababarka
Qoraalada kale ee sheega ArcGIS
U diyaargarowga seminar GvSIG
6 Jawaabo "Dhammaan wixii ku saabsan ArcGIS"
Juun, 2020 at
Galab wanaagsan. Waxaan hayaa waqti cayiman oo aan kula kulmo toddobaadka soo socda ee fulinta mashruuca,, si lama filaan ah ArcGis 10.4.1 ma furi doono miisaska soo-saarka ama daaqadaha Macluumaadka ee lakabka. Waxaan u baahanahay inaan galo oo aan wax ka beddelo miisaska oo aan si joogto ah wax uga weydiiyo waxyaabaha ka kooban lakabka ..
Rashad isagu wuxuu leeyahay:
Barnaamijka "Arcgis" barnaamijka aad rabto?
Nachopper isagu wuxuu leeyahay:
Good, waxaan rajaynayaa Ma i caawin kartaa, waxaan u baahan tahay in aad is geliso jiheeyaha kacay on Jooloojiyadda ah (dhab ahaan waxaa jira dhowr) qalin for diyaaradaha in aan doonayo in aan ku hesho in ay muujiyaan map Jooloojiyadda of deegaanka iyo Ubax tilmaamaha ah ee dhibcood, halkaas oo qalcadahaba waxaa ku yaalla Naarta, iyo jid ay ku hesho ama sida in sidaas la sameeyo, waxaan jecelahay in haddii ay jirto cid og yahay sida loo sameeyo ama ka dhigay i aad u sheegto sida.
Miyaan ka tagaa post iyo ii sheeg, oo aad u badan kugu mahad naqayaa, salaan.
আবদুল হালিম isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa inaan barto ArcGIS.
Bogga gabrielOrtiz ayaa la xidhay sanad ka hor.
Tuti isagu wuxuu leeyahay:
Salaan, tani waa su’aal dadka reer Kolombiya: Maxaa dhacaya haddii aan joogo meel ku dhacdo iskuxirka asalka Bari (magna Columbia), laakiin taa beddelkeeda waxaan abuuraa asal asal ahaan Magna Colombia Bogota? Ma xalaal baa in sidaas la sameeyo? Waxaan sidoo kale rabay inaan weydiiyo haddii ay ogyihiin waxa ku dhacay madasha gabrielortiz sababta oo ah hadda kama helin in laga helo internetka. shp